Wabiga shabeelooyinka oo guray kana jirta biyo la’aan xoogan dadka, Xoolaha iyo Beeraha – Walaal24 Newss
Wabiga shabeelooyinka oo guray kana jirta biyo la’aan xoogan dadka, Xoolaha iyo Beeraha
Biyo la’aanta iyo abaaraha Saameyn xoyogan ayaa ka dhalata oo ka taagan deegaano ka tirsan Gobolka Shabeelooyinka, kadib markii uu guray webigi Shabeele ee marayay Gobolada Shabeelooyinka iyo Hiiraan.
Mas’uuliyin ka tirsan maamulka Hirshabeele iyo kuwa Gobolka Shabeelada Dhexe ayaa kormeer ku sameeyey deegaano ka tirsan gobolkaasi, kuwaasi oo u kuurgalayay inta ay la egtaya saameynta biyo la’aanta iyo abaarta halkaasi ka jirta, iyagoo mas’uuliyiintani sheegay in loo baahanyahay in waxbadan laga qabto dhibaatadaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelada Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo wafdi kale oo kormeerkaasi qiimeynta ah sameeyey ayaa sheegay in biyo la’aantii ugu darnayd ay ka taagan tahay deegaanada Gobolka, isagoo ugu baaqey Dowladda Soomaaliya, maamulka Hirshabeele iyo Hay’adaha Caalamiga ah in ay u istaagana sidii loo samatabixin lahaa dadkaasi dhibaataysan.
“DHulka abaaro iyo biyo la’aan ayaa ka jirta, waxaan tagnay Raaga Ceele,halkani waxaa kajirta biyo la’aan xoogan, jiirgaankii biyaha waxaa lakala siistaa 20 kun oo Shillin Soomaali ah, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka, sidaaasi ayaa jirta laakiise waxkasta waa ilaahay awoodiisa, waxaan Dowladda Soomaaliya, dowlada Goboleedkan iyo Hay’adaha caalamiga ah waxaan ugu baaqeynaa in ay kaalin ka qaataan sidii dadkaasi loo samatabixin lahaa”. Ayuu yiri Guddoomiye Axmed Faal.
Arrimahani ayaa loo aanaynaya iyadoo aanay jirin qorshe ku aadan in laga faa’idaysto kedinta kheyraadka biyaha ee Webiga xiliga uu biyo keeno, taasi o sababta mar hadii uu biyo yareeyo uu guro webiga in ay ka dhalato biyo la’aan oo saameysa nolosha dadka iyo duunyada.
R/wasaare ku Xigeenka Dalka oo Hambalyo u diray Madaxweynaha Cusub ee Puntland
Sawiro: Guddiga qaban qaabada maalmaha xorriyadda oo diyaar garowgii ugu danbeeyay ku jira
Wasiir Bayle oo Adis Ababa kaga qeyb-galay shir looga hadlayo Dhameystirka hanaanka deyn cafinta
Dhul gariir xalay laga dareemay Gobolada Dalka Kenya khasaarana aan laga soo sheegin